September 2020 - MinSayYar
မြူးဇစ်ဇုန်ကေတီဗီ ပိုင်ရှင်နဲ့ မန်နေဂျာကို အမှုဖွင့်လိုက်ပါပြီ
မြူးဇစ်ဇုန်ကေတီဗီ ပိုင်ရှင်နဲ့ မန်နေဂျာကို အမှုဖွင့်လိုက်ပါပြီ.. ကိုဗစ် ရောဂါကူးစက်မှု အများအပြားဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သော မြူးဇစ်ဇုန် စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးဇော်မင်းနှင့် မန်နေဂျာဦးမျိုးဇော်တို့ နှစ်ဦးကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။ အဆိုပါ ကေတီဗီကို သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနမှူး၊ တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာစောအောင်ရွှေဖြူ (မြို့နယ်အဆင့် ကိုဗစ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ် တုန့်ပြန်ရေးကော်မတီ(သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်)မှတရား လိုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့မရဲစခန်း (ပ) ၁၀၅၃/၂ဝ၂ဝ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေပုဒ်မ -၂၅အရအမှုဖွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုဒ်မ(၂၅) အရ ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် နှစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ########################## မြူးဇစ်ဇုန်ကေတီဗီ ပိုင်ရှင်နဲ့ မန်နေဂျာကို အမှုဖွင့်လိုက်ပါပြီ.. ကိုဗစ် ရောဂါကူးစက်မှု အများအပြားဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သော […]
ရန်ကုန်ကိုဗစ်ကို အပြီးတိုက်ရန်အတွက် ကရင်ပြည်နယ် မြို့နယ်ဆေးရုံများမှ သူနာပြု ဆရာ/ဆရာမ (၂၀) ဦးလာရောက်ကူညီ
ရန်ကုန်ကိုဗစ်ကို အပြီးတိုက်ရန်အတွက် ကရင်ပြည်နယ် မြို့နယ်ဆေးရုံများမှ သူနာပြု ဆရာ/ဆရာမ (၂၀) ဦးလာရောက်ကူညီ————————စက်တင်ဘာ ၃၀ ရန်ကုန်ကိုဗစ်ကို အပြီးတိုက်ရန်အတွက် ကရင်ပြည်နယ် မြို့နယ်ဆေးရုံများမှ သူနာပြု ဆရာ/ဆရာမ (၂၀) ဦးသည် လာရောက်ကူညီဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး COVID-19 ရောဂါ ကုသရေးဌာန(ဒဂုံတောင်ပိုင်း)တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အတွက် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်ဆေးရုံများမှ သူနာပြု ဆရာ/ဆရာမ (၂၀) ဦးသည် ယနေ့၊ နံနက်ပိုင်းက ဘားအံမြို့ ပြည်နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှ မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် ထွက်ခွာခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။ #MyanmaPlatform #News #Domestic, ##################### ရန်ကုန်ကိုဗစ်ကို အပြီးတိုက်ရန်အတွက် ကရင်ပြည်နယ် မြို့နယ်ဆေးရုံများမှ သူနာပြု ဆရာ/ဆရာမ (၂၀) ဦးလာရောက်ကူညီ————————စက်တင်ဘာ ၃၀ ရန်ကုန်ကိုဗစ်ကို အပြီးတိုက်ရန်အတွက် ကရင်ပြည်နယ် […]
ယနေ့ မော်လမြိုင်ဆေးရုံကြီးတွင် ကိုဗစ် Positive လူနာ(၁)ဦး ထပ်မံသေဆုံး
သေဆုံးသူမှာ အသက်(၇၄)နှစ်အရွယ်ရှိ ကျောက်ကပ်ရောဂါအခံရှိသူဖြစ်ပါသည်။ သေဆုံးသူမှာ မုဒုံမြို့နယ် ကမာဝက်ရွာ ဇာတိဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တွင် သွားရောက်ဆေးကုသ၍ ပြန်လာပြီးနောက်ဆွေမျိုးများရှိရာ မော်လမြိုင်မြို့ ၆ မိုင် သွေးသောက်ရွာတွင် လာရောက်နေထိုင်ပြီး ဆေးကုသမှုခံယူနေသူဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်ပြန်ခရီးသွားရာဇဝင်ရှိ၍ မော်လမြိုင်ဆေးရုံကြီး HQ တွင် သံသယလူနာအဖြစ်ထားပြီး Swab ယူစစ်ဆေးရာမှ Positive လူနာဖြစ်ခဲ့ပြီး ယနေ့ ၃၀.၉.၂၀၂၀ နံနက် (၉)နာရီ(၃၀)မိနစ်အချိန်ခန့်တွင် သေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။ သေဆုံးသူ၏ DB အား ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ မော်လမြိုင် RESCUE လူမှုကယ်ဆယ်ရေးကွန်ယက်မှ ရင်ခွဲရုံမှ ပိန္နဲကုန်းသုသာန်သို့ ပို့ဆောင်၍ မီးသဂြိုလ်ကူညီပေးခဲပါသည်။ ဇင်မိုးမော်လမြိုင် RESCUE လူမှုကယ်ဆယ်ရေးကွန်ယက် မော်လမြိုင် (၁၀)မြို့နယ်ဆောင် CBFQ Center. unicode သဆေုံးသူမှာ အသကြ(၇၄)နှစအြရှယရြှိ ကွောကကြပရြောဂါအခံရှိသူဖှစပြါသညြ။ သဆေုံးသူမှာ မုဒုံမှို့နယြ ကမာဝကရြှာ […]
ယနေ့ ဧရာဝတီစင်တာမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေသူ ကိုဗစ္လူနာ (၁၂၀)ကျော် အိမ်ပြန်ခွင့်ရခဲ့ြပီ
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့အတွက် ဝမ်းသာစရာသတင်းကတော့ ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ ကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ ကိုဗစ်လူနာ (၁၂၀) ကျော်ဟာ ရောဂါပျောက်ကင်းပြီး အိမ်ပြန်ခွင့်ရခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ ရန်ကုန်မှာ ကူးစက်မှုတွေမြင့်မားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ “အားလုံး ကျန်းမာစွာနဲ့ အိမ်ပြန်နိုင်ကြပြီမို့ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရသလို လွတ်သွားတဲ့ အခန်းတွေမှာ နောက်လာမယ့် သူတွေ အဆင်သင့် နေထိုင်နိုင်စေဖို့ ကျန်နေခဲ့သူတွေကလည်း စေတနာစိတ်ဓာတ်မြင့်မားစွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနဲ့အတူ လက်တွဲပြီး ဝိုင်းဝန်းသန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးကြတဲ့အတွက် ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းမှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်” ဆိုပြီးတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့အချိန်ထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်လူနာပေါင်း ၁၂၄၁၅ ဦးရှိပြီး သေဆုံးသူ စုစုပေါင်း ၂၈၄ ဦးရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလဲ ကိုဗစ်ကာလမှာကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ကြပါ။ Swelsone News unicode ပရိသတကြှီးရေ ဒီနေ့အတှကြ ဝမြးသာစရာသတငြးကတော့ ဦးဇောဇြောရြဲ့ ကိုဗစကြုသရေးစငတြာမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနတေဲ့ ကိုဗစလြူနာ […]
မြန်မာပြည် ကိုဗစ်တိုက်ပွဲအတွက် နိုင်ငံစုံက ဒေါ်လာ သန်း ၈၀ ထောက်ပံ့လိုက်ခြင်းနဲ့ နောက်ဆုံးရသတင်းများ
မြန်မာပြည် ကိုဗစ်တိုက်ပွဲအတွက် နိုင်ငံစုံက ဒေါ်လာ သန်း ၈၀ ထောက်ပံ့လိုက်ခြင်းနဲ့ နောက်ဆုံးရသတင်းများ ပိုးကူးစက်မှုခံရတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို သီးသန့်ထားရှိကုသမှာဖြစ်ပီး အဲဒီလို ကုသနိုင်ဖို့ ရန်ကုန်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံသစ်ကြီးနဲ့ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ ပြင်ဆင်နေပါပီ။ လိုအပ်တဲ့ ဆေးပစ္စည်းတွေ ဝယ်ယူဖို့ ဂျပန်နိုင်ငံက ပေးတဲ့ ဒေါ်လာ ၂၇ သန်းအပါအဝင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာက ထောက်ပံ့ငွေ ဒေါ်လာ သန်း ၈၀ ကျော်အထိ ရရှိထားပါတယ်။ အစိုးရကလဲ ကျပ် ဘီလီယံ ၂၆၇ ကျော် ထပ်မံထောက်ပံ့ထားပါတယ်။ သတိပေးချင်တာတခုက အခုအခါ အွန်လိုင်းမှာ ရောင်းချနေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စစ်ဆေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ တက်စ်ကစ် တွေဟာ လုံးဝ မသုံးသင့်ပါဘူး။ မဝယ်သင့်ပါဘူး။ အဲဒါတွေက Antibody ကို စစ်တာဖြစ်ပီး အမှားအယွင်း အလွန်များပါတယ်။ ကိုဗစ် ကာလအစမှာ […]
စစ်ကိုင်းယူနိုက်တက်ဘောလုံးအသင်းရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဖိုးချစ်ကတော့ ဒီနေ့မှာ သူ့ရဲ့အသင်းအတွက် ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းလေးကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကာလအခက်အခဲတွေကြောင့် မြန်မာနေရှင်နယ်လိခ် ဘောလုံးအသင်းတွေထဲက နှစ်သင်းကတော့ ပထမရာသီအပြီးမှာပဲ ဖျက်သိမ်းလိုက်တာကိုတော့ ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဖိုးချစ်ကတော့ သူကိုယ်တိုင်လည်း ဘောလုံးဝါသနာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရုံသာမက မြန်မာ့ဘောလုံးလောကကို တိုးတက်စေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ စစ်ကိုင်းယူနိုက်တက်ဘောလုံးအသင်းကို တည်ထောင်ထားပေမယ့်လည်း လတ်တလောကိုဗစ်ကာလမှာ အသင်းရပ်တည်ဖို့ ခက်ခဲနေတာကြောင့် ဦးဇော်ဇော်က လှူဒါန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း မျှဝေလာပါတယ်။ “Covid-19 ကာလတွင် အခက်အခဲရှိသော စစ်ကိုင်းယူနိုက်တက်ဘောလုံးအသင်းအား Max Energy မှ ကျပ်သိန်းတစ်ထောင် ကူညီပေးပါသောကြောင့် ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်နှင့်တကွ Max Energy မိသားစုအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင် အပ်ပါသည်ခင်ဗျာ…. ဆထက်ထမ်းပိုး အများအကျိုးရွက်ဆောင်နိုင်ပါစေ…. ကျေးဇူး ဦးဇော်” ဆိုပြီး ဦးဇော်ဇော်ကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဦးဇော်ဇော်ကတော့ မြန်မာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဌတစ်ယောက်ဖြစ်သလို မြန်မာ့ဘောလုံးလောကရဲ့အရေးကိစ္စမှန်သမျှကို လူအား၊ငွေအားစိုက်ထုတ်ပြီး […]
ကျောင်းစာကို အလွတ်ကျက်ပြီးဖြေဆိုခြင်းဟာ စာကူးချပြီးဖြေဆိုခြင်းနဲ့ တူတယ်လို့ ယူဆပါတယ်.. ကိုယ်တို့ကျောင်းပြန်ဖွင့်လို့ ကျောင်းသားတွေ ရောက်လာကြပြီ။ စာသင်တာ မစခင် ပထမဆုံး ရှင်းရမဲ့ ဇတ်လမ်းအတွက် ပြင်ဆင်ရင်း အဲဒီအကြောင်းလေး ပြောပြချင်တယ်။ အမှုက စာကို အလွတ်ကျက်ပြီး ဖြေမှု။ ကျောင်းသားက အလွတ်ကျက် ဖြေတာ အပြစ်လား မေးရင် ဟုတ်တယ်လို့ဘဲ ပြောရမှာ။ ကိုယ်ရှင်းပြပါ့မယ်။ ကိုယ်တို့ မြန်မာတွေတင်မက အာရှက ကျောင်းသားတွေနဲ့ သိပ်မရင်းနှီးသေးတဲ့ ပညာရေးလောက က အမှုတစ်ခုပေါ့။ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Plagiarism (ပလေဂျီရာရစ်ဒ်ဇင်မ်) လို့ ခေါ်တယ်။ တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ရင်တော့ ခိုးယူကူးချခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရမယ် ထင်တယ်။ (အခုရေးနေတဲ့ စာလေးမှာ “ပီ” လို့ အတိုခေါက် ခေါ်ပြီး ဆက်ရေးပါမယ်။) “ပီ” ရဲ့ […]
လာမယ့် နှစ်ရက်အတွင်း မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတွင် လှိုင်းကြီးပြီး မိုးပြင်းထန်စွာ ရွာမည်
လာမယ့် နှစ်ရက်အတွင်း မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတွင် လှိုင်းကြီးပြီး မိုးပြင်းထန်စွာ ရွာမည် လာမည့် ၄၈နာရီ(နှစ်ရက်) အတွင်း မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် လှိုင်းကြီးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနနှင့် မိုးလေဝသပညာရှင်တို့က ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ပင်လယ်ပြင်အတွင်း ခရီးသွားလာသူများနှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများ အနေဖြင့် အဆိုပါအချက်ကို သတိပြု သွားလာရန် လိုကြောင်း အဆိုပါပညာရှင်များက ပြောပါတယ်။ တိုင်းထွာချက်များအရ လေဖိအားနည်းဆဲလ်တစ်ခုသည် မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှဖြတ်၍ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင် သို့ရောက်ရှိနေပြီး အဆိုပါဆဲလ်အရှိန်ကြောင့် အောက်တိုဘာ ၂ရက်နေ့တွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက် မြောက်ပိုင်းနှင့် အနောက် အလယ်ပိုင်းတို့၌ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ကြောင်း မိုးလေသဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်မိုးဦးက ပြောပါတယ်။ “သူက အိန္ဒိယကို ဝင်မှာပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာတော့ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတွေမှာ […]
ဖောင်ကြီးမှာ ကုသမှုခံနေတဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက် ရေးထားတာပါ။ စင်္ကာပူကို ကျော်တာ မကျော်တာ သူစိတ်မဝင်စားဘူးတဲ့.. သူစိတ်ဝင်စားတာက.. နိုင်ငံတော်ကကျွေးတဲ့ ထမင်း… ဒီအစိုးရဟာ ကျွန်တော့် အပေါ်မှာ အများကြီးကျေးဇူးရှိသွားပြီ.. အပြင်မှာ ပုစွန်ဟင်းတစ်ပွဲဘယ်လောက်လဲ… တစ်ဗူးကို ၁၅၀၀ ပဲထား ၃ နပ်စာ တရက်ကို ၄၅၀၀ လူတစ်ဦးကို စုစုပေါင်း ၁၁ ရက် ၄၉၅၀၀ ကျပ်တိတိ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာသုံးစွဲတယ် ဒီပိုက်ဆံတွေဟာ ဘယ်ကရသလဲ.. ခင်ဗျားတို့ သိပ်များလှပါတယ်လို့ ညည်းနေတဲ့ အခွန်တွေဆီကပဲ… ပြည်သူပိုက်ဆံ ပြည်သူဆီကိုပြန်ရောက်တဲ့အစိုးရ… အဲ့ဒီတော့ သူဌေးတွေလည်း ဒီအစိုးရကိုယုံတယ်ဆိုရင် အခွန်တွေလည်းမရှောင်ကြပါနဲ့လို့… စင်္ကာပူကိုကျော်တာမကျော်တာတော့ ကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားဘူး ပြည်သူတွေ အခက်အခဲဖြစ်နေချိန် ဒုက္ခကျရောက်နေချိန်မှာ လက်ပိုက်ကြည့်မနေတဲ့ အစိုးရနဲ့ ပြည်သူတွေကို တမင်ဒုက္ခပေးတဲ့ အစိုးရနဲ့ ဘယ်အစိုးရရွေးမလဲဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းပါတယ်…. […]
နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ဆေးစစ်ချက် အဖြေ Negative ဖြစ်နေပြီး သေဆုံးသွားမှ Positive ပြန်ထွက်နေခဲ့တဲ့ အဖြစ်
Covid19သည် ရောဂါကူးဆက်ပြန့်နူန်းမြန်မားပြီးကုသဆေးမထွက်ရှိသေးပေ။ပို၍ဆိုးသည်မှာရောဂါပိုးသည်အလွန်မာယာများပြီး ရောဂါပိုးစစ်ဆေးမူများထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ကြရသည်။နေပြည်တော်တွင် FQ ဝင်နေသူတစ်ဦးသည် နှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးရာ Negative နှစ်ကြိမ်ပြ၍ (14)ရက်ပြည့်ပြီးအိမ်သို့ပြန်နေခဲ့သည်။အိမ်တွင် Home Quarantine နေစဉ်အတွင်းရုတ်တရက်သေဆုံးခဲ့တာကြောင့် Covid19 ပိုးရှိမရှိပြန်လည်စစ်ဆေးခဲ့ရာ Positive အဖြေထွက်ရှိခဲ့သည်။နေပြည်တော်ကုတင်(1000)ဆေးရုံသို့သေဆုံးပြီးမှရောက်ရှိလာတာကြောင့်ပြန်လည်စစ်ဆေးရာ Positive ဖြစ်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်။ Negative ဖြစ်နေ၍အိမ်သို့ပြန်ခွင့်ပြုခဲ့သော်လဲ သေဆုံးပြီး Death Body ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးရာ Positive ဖြစ်နေခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။Covid19 ရောဂါသည် ကူးဆက်မူနူန်းမြင့်မားသကဲ့သို့ ရောဂါပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးမူများပြုလုပ်ရာတွင်လဲအခတ်အခဲရှိကြောင်းသိရှိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် Covid19 ကြောင့်သေဆုံးသူ (200)ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူများမှာရောဂါအခံရှိသူများ ကိုယ်ခံအားမကောင်းသူများဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင်လည်း သေဆုံးသူဦးရေ 998000 ကျော်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ Unicode Covid19သည် ရောဂါကူးဆက်ပြန့်နူန်းမြန်မားပြီးကုသဆေးမထွက်ရှိသေးပေ။ပို၍ဆိုးသည်မှာရောဂါပိုးသည်အလွန်မာယာများပြီး ရောဂါပိုးစစ်ဆေးမူများထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ကြရသည်။နေပြည်တော်တွင် FQ ဝင်နေသူတစ်ဦးသည် နှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးရာ Negative နှစ်ကြိမ်ပြ၍ (14)ရက်ပြည့်ပြီ အိမ်သို့ပြန်နေခဲ့သည်။အိမ်တွင် Home Quarantine နေစဉ်အတွင်းရုတ်တရက်သေဆုံးခဲ့တာကြောင့် Covid19 […]